အပေါ် – တေလာ Lopes ツဘလော့
၎င်းသည်အိုင်တီနှင့်သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဆိုင်ရာဘလော့ဂ်တစ်ခုဖြစ်သည်. အကြံဥာဏ်သည်နည်းပညာဆိုင်ရာဗဟုသုတနှင့်နေ့စဉ်ဘဝတွင်ပေါ်ပေါက်လာသောပြproblemsနာများနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်ဖြစ်သည်, လိုအပ်သူများအတွက်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုရင်းမြစ်တစ်ခုအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း, ငါ့ကိုအပါအဝင်ツ
စနစ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်ဝဘ်ပရိုဂရမ်းမင်းကျွမ်းကျင်သည်, Taylor Lopes သတင်းအချက်အလက်လုံခြုံရေးအတွက်ဘွဲ့ရသည် (UnB / 2014), အိုင်တီစီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်ဘွဲ့လွန် (Unisul / 2010) နှင့် Data Processing နည်းပညာဘွဲ့ရရှိခဲ့သည် (ESEEI / 2004). Professional Scrum Master I အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်လည်းရထားတယ် (Scrum.org/2016)eZend အသိအမှတ်ပြု PHP အင်ဂျင်နီယာတစ် ဦး – ZCPE (Zend / 2017). သူသည်Brasíliaတက္ကသိုလ်တွင် Master's ကျောင်းသားဖြစ်သည်.
» Micros ၏တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်း (2002) - အထက်တန်းကျောင်း, Curitiba / PR
» Shell Script (2003)- ESEEI - JúlioCézar Neves, စာရေးသူ Shell Programming စာအုပ်
» ကွန်ယက်ကိုညွှန်ပြရန် (2003) - ရေးဆွဲ, Curitiba / PR
» Debian ဖွဲ့စည်းပုံ (2006) - IBM, UNB, ITI နှင့် CELEPAR
» Apache (2006) - IBM, UNB, ITI နှင့် CELEPAR
» Samba (2006) - IBM, UNB, ITI နှင့် CELEPAR
» programming ကို PHP ကို (2006) - IBM, UNB, ITI နှင့် CELEPAR
» ပေါ့ပါးသောဂရပ်ဖစ်ပတ်ဝန်းကျင် (2006) - IBM, UNB, ITI နှင့် CELEPAR
» ဂျာဗားနိဒါန်း (2007) - IBM, UNB, ITI နှင့် CELEPAR
» ချည်နှောင်လျက် (2007) - IBM, UNB, ITI နှင့် CELEPAR
» IPTables / Firewall (2007) - IBM, UNB, ITI နှင့် CELEPAR
» LTSP (2007) - IBM, UNB, ITI နှင့် CELEPAR
» ရေဘဝဲ (2007) - IBM, UNB, ITI နှင့် CELEPAR
» Joomla တပ်ဆင်ခြင်း (2007) - IBM, UNB, ITI နှင့် CELEPAR
» မိုးဇက် (2007) - IBM, UNB, ITI နှင့် CELEPAR
» စီမံကိန်းကိုစီမံခန့်ခွဲမှု (2007) - IBM, UNB, ITI နှင့် CELEPAR
» Shell Script (2007) - IBM, UNB, ITI နှင့် CELEPAR
» အခြေခံ Linux သင်တန်း (2007) - EB သင်ကြားခြင်း
» ဝက်ဘ်စာမျက်နှာညီလာခံ (2007) - EB သင်ကြားခြင်း
» TCP / IP ကွန်ယက်၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအခြေခံအဆင့် (2010) - EB သင်ကြားခြင်း
» အဆင့်မြင့် Linux အဆင့် – Firewall (2010) - EB သင်ကြားခြင်း
» လုံခြုံရေးအဆင့်အိုင်တီမှလျှောက်ထား (2010) - EB သင်ကြားခြင်း
» အဆင့်မြင့် Linux အဆင့် – Samba (2010) – အီးသင်ကြားရေး
» ဝက်ဘ်စာမျက်နှာများဖန်တီးခြင်း၏အခြေခံအဆင့် (2010) – အီးသင်ကြားရေး
» ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာမှုခင်း (2013) – CISL, João Eriberto စာရေးသူ “Linux ကိုရှာဖွေခြင်း”
» Debian ထုပ်ပိုးမှု (2013) – CISL, João Eriberto စာရေးသူ “Linux ကိုရှာဖွေခြင်း”
» စီစဉ်သည်. စနစ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု (2013) - IBM, UNB, ITI နှင့် CELEPAR
» UML (2013) - IBM, UNB, ITI နှင့် CELEPAR
» Cryptography နှင့် Digital Keys များ (2013) - IBM, UNB, ITI နှင့် CELEPAR
» WebDesigners များအတွက်အသုံးပြုနိုင်စွမ်း (2013) - IBM, UNB, ITI နှင့် CELEPAR
» ပုံမှန်အသုံးအနှုန်းတွေ (2013) - ပေးပို့ခြင်း, JúlioCézar Neves
» Software ကန်ထရိုက်များတွင်မက်ထရစ်များအသုံးပြုခြင်း (2013) - ပေးပို့ခြင်း, ဂလော်ဒီယာဟာဇန်
» Cisco သည် CCNA လမ်းကြောင်း & switching (2013) - Netts, Brasilia
» Java Programming နိဒါန်း (2015) – သစ်ပင်သင်ယူခြင်း, ယူအက်စ်အေ
» Web Applications များကိုလုံခြုံအောင်လုပ်ခြင်း, ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ဆာဗာများ (2015) – သစ်ပင်သင်ယူခြင်း, ယူအက်စ်အေ
» Java Web Applications များကိုတီထွင်ခြင်း (2015) – သစ်ပင်သင်ယူခြင်း, ယူအက်စ်အေ
» Website တစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်း (2015) – သစ်ပင်သင်ယူခြင်း, ယူအက်စ်အေ
» Responsive Web Design အတွက် CSS3 (2015) – သစ်ပင်သင်ယူခြင်း, ယူအက်စ်အေ
» Scrum အခြေခံများ – PSM စာမေးပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုငါ (2016) – အချစ်
» ပရော်ဖက်ရှင်နယ် Scrum မာစတာငါလက်မှတ် (2016) – Scrum.org
» Zend လက်မှတ်ရ PHP အင်ဂျင်နီယာတစ် ဦး – ZCPE (2017) – Zend.com
» Software Engineering ၏အဆင့်မြင့်ခေါင်းစဉ်များ – Gamificação (2017) – ပါမောက္ခဒေါက်တာSérgio Freitas, UnB
» ဒေတာဘေ့စ – (2017) – ပါမောက္ခဒေါက်တာ Maristela Terto နှင့် Marcio Victorino, UnB
» Curso Oracle ကဒေတာဘေ့စ: PL / SQL (2017) လေ့ကျင့်ရေး – ပါမောက္ခ Clayton Leite
» Software ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်လုံခြုံရေး (2017) – Serpro
» software တည်ဆောက်ခြင်း – စတင်တည်ထောင်သည် (2018) – Profi ငါအလက်ဇန်းဒါး Gomes, UnB
» Software ဗိသုကာနှင့်ဒီဇိုင်း (2018) – ပါမောက္ခ Me Paulo Merson, UnB
ကျွန်တော့်နာမည်တေလာပါ (ရီယို / 1974). ဘုရားသခ, မိသားစု, အလုပ်နှင့်လေ့လာမှုကိုငါ့ ဦး စားပေးဖြစ်ကြသည်, သေချာပေါက်ဒီနိုင်ရန်အတွက်. လူထု? အနည်းငယ်. ဘဝမှာဘုရားသခင်ကိုချစ်ဖို့ရိုးရိုးလေးပဲမျှော်လင့်ပါတယ်, ငါ၏အဖြစ်တည်မှု၏အကြောင်းပြချက်. ငါ့မိသားစုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပါ: သူမငါ့ကိုလုပ်တယ်. အလုပ်လုပ်ရန်, သို့မဟုတ်အလုံအလောက်. လေ့လာခြင်းသည်လည်းအရေးကြီးသည်, ငါတိုးတက်နေပြီ. ဒါပေါ့, ငါသတင်းအချက်အလက်ချစ်ကြတယ်!
ကျွန်ုပ်၏ပထမဆုံးကွန်ပျူတာသည်ကျွန်ုပ်အဖေထံမှလက်ဆောင်ဖြစ်သည်, တွင် 1996. ထိုကတည်းက, ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေရဲ့ဒီဇိုင်းပုံစံကိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားလာတယ်. နည်းပညာများတိုးတက်ပြောင်းလဲလာသည်နှင့်အမျှဗဟုသုတအသစ်များလည်းရှာဖွေရန်လိုအပ်လာသည်.
ငါတကယ်အများပြည်သူအဖွဲ့အစည်းအတွက်ငါ့အပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘဝစတင်ခဲ့သည် 1993 အီး, အလုပ်အပေါ်, ရီယိုဒီဂျနေရိုမှာနေထိုင်ခွင့်ရခဲ့တယ်, Manaus, Curitiba, Cucuí (နံနက်), Florianopolis, Brasilia နှင့် Washington / DC တို့ဖြစ်သည် (ယူအက်စ်အေ), ကတည်းကသရုပ်ဆောင် 2002 အိုင်တီinရိယာ၌တည်၏.
တွင် 2009 ကျန်းမာရေးမရှိရင်ဘာမှမရှိဘူးဆိုတာကျွန်မသိလိုက်ရတယ်. ဤကဲ့သို့သောကာလ၌, နာကျင်မှုဝေဒနာသည်ငါတို့လိုချင်သောတစ်ခုတည်းသောအရာဖြစ်သည်. ထိုကွောငျ့, ငါ့အကြံဥာဏ်: ရေမသောက်ရ! ဒီလိုလုပ်ပြီးပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ, ကျွန်တော့်ကိုယုံပါ. ထိုမှတပါး, ငါဘယ်လိုရရမယ်ဆိုတာသိတယ်, ကျေးဇူးပြု၍ ငါ့ကိုသိအောင်လုပ်ပါ!
ငါသင်ယူစရာတွေအများကြီးရှိတယ်၊ ကျေးဇူးတင်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်, အထူးသဖြင့်ငါ့မိဘတွေ. ခက်ခဲဘဝနေသော်လည်း, အခြားသူတွေကိုပညာရေးနှင့်ရိုသေလေးစားမှုရှိရန်လမ်းနှင့်ကျွန်ုပ်နှင့်ငါ့ညီတို့အားမည်သို့ပါ ၀ င်ရမည်ကိုသိသည်. နင့်ကိုချစ်တယ်, ဘုရားသခင်သူတို့ကိုဆုချတယ်.
မူပိုင်ခွင့် © 2022 taylorlopes.com အောက်တိုဘာလကတည်းက 2012, 3.646.017 ဝင်ရောက်ခွင့်